TestFlight: iOS Beta Kuedza uye Live Live Kuongorora | Martech Zone
China, June 4, 2020 China, June 4, 2020 Douglas Karr
Nharembozha kunyorera kuyedza idanho rakakomba mune yega nharembozha yekushandisa Nepo zvinobudirira nharembozha zvine kushamisika kubatanidzwa uye inopa hukuru hwakakura kune vatengi nemabhizinesi zvakafanana, buggy mobile application haingori njodzi yaunogona kugadzirisa nyore.
Kutumirwa kweiyo yakaputsika app kana app ine mashoma usability inozodzikamisa kutorwa, kukwira kudenga kusarongeka kuongororwa ... uyezve kana iwe uchinyatso kugadzirisa chirongwa, iwe uri kuseri kwebhola.
Mukati meiyo Apple nzvimbo yekuvandudza kunyorera, kusanganisira iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, uye Apple TV, mhinduro yekuyedza beta uye kutora madhiragi uye nenyaya dzevashandisi Kwayedza.
Testflight ndeye beta application deployment chikuva kwaunogona kukoka vashandisi kuti vaedze zvaunoshandisa. Izvi zvinogonesa timu yako kuona mabugs uye kuunganidza zvakakosha mhinduro usati waburitsa maapplication ako paApp Store. Uine Testflight, unogona kukoka vanosvika zviuru gumi vanoedza uchishandisa yavo chete email kero kana nekugovana yeruzhinji link.
Rondedzero yeMafoni Ekushandisa Kwayedza
Pane akati wandei nyaya dzinogona kuzivikanwa neMobile Application kuyedza yaunofanira kufunga nezvayo:
kugarisana - Screen resolution, inoratidzira nyaya nemamiriro ekunze uye portrait modes, shanduro sisitimu dzese dzinogona kukanganisa mashandiro anoita mushando wako.
Permissions - Iwe une mvumo yakamisikidzwa zvakanaka uye yakagadzirirwa kuwana mafoni maficha (mafaera, kamera, accelerometer, isina waya, wifi, bluetooth, nezvimwewo)
Bandwidth - Mazhinji maapplication akabatanidzwa negore, saka iwe unenge uchida kuona yakaderera bandwidth haina kukanganisa mashandiro ekushandisa… kana zvirinani rega mushandisi azive kuti panogona kuve nekudzikiswa kuita. Iwe ungangoda kutsvaga vashandisi vanongova ne2G kubatana kwese kuenda ku5G.
Kubudirira - Vazhinji kuvhurwa kwekushandisa uye vane mushambadziro wekushambadzira wakakomberedza iwo wekuendesa. Wese munhu anosaina uye iko kushanda kunopunzika sezvo maseva ako akabatanidzwa asingakwanise kutora kumanikidza. Kutakura mutoro uye kugona kwako kuyera uye kugadzirisa nyaya dzekunetseka kwakakosha.
Usability - Nyora pasi nyaya dzevashandisi pamabatiro aunotenda kuti vashandisi vanofanirwa kushamwaridzana nechishandiso chako wozoona mashandiro avanoita Screen yekurekodha inzira yakanaka yekuziva panogona kuvhiringidzika uye kuti ungaite sei kugadzirisa zvinhu kuti uve nechokwadi chekushandisa mushe.
Analytics - Iwe wakanyatso kubatanidzwa neye mobile analytics SDK yekutarisa yako app kusangana kubva kune mumwe mugumo kuenda kune mumwe? Unoda izvo - kwete zvekushandisa chete, asi zvakare kuisa chero yevatengi rwendo rwekutarisa uye shanduko metric.
Localization - Chishandiso chako chinoshanda sei munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo uye nemitauro yakasiyana yakaiswa pachigadzirwa?
Notifications - Wakamboedza here ziviso ye-in-app kuona kuti dzinoshanda, dzinogona kugadziridzwa mushe, uye dzinogona kuteverwa?
kupora - Kana (uye riinhi) chikumbiro chako chikapunzika kana kupaza, urikutora iyo data? Anogona here mushandisi kupora kubva kubondera pasina nyaya? Vanogona here kumhan'ara nyaya?
kutevedzera - Ko yako nharembozha yakachengeteka, ese magumo ayo akachengeteka, uye anoenderana zvizere nezvose zvinodiwa zvemitemo usati waenda kunorarama? Paunenge uri kuyedza beta, iwe unoda kuve nechokwadi.
Kuisa mari yakawanda pakuyedza kuchave nechokwadi chekubudirira kwesoftware application. Testflight chishandiso chakakosha muApple ecosystem kuona kuti application irikushanda nemazvo, kutsamira kwakakodzera kodhi, uye kunyorera kwako kunowana kukurumidza kutorwa uye kushandiswa kwakapararira nevateereri vako.
Apple Inovandudza Yekuyedza
Tags: app analyticsapp bandwidthapp kugarisanaApp vateerereapp kutarisisaapp kuporaapp scalabilitykushandiswa kweappkuyedza iosiphone kugovera appiphone yekuyedza appiphone beta kuyedzaMobile Anwendungtestflighttestflight rarama